Ciidamada Somaliland Ee Shalay Qabsaday Saldhigii God-qaboobe Oo Laga Baqayo In Magaalada Garoowe Ay Qabsadaan – Codka Qaranka Tanadland
Sababta keliya ee aanan uga waramin ilaa iyo hada, dagaalkii shalay sida xun loogu jebiyey beesha Habar-majeerteen. Oo saldhigoodii ciidan ee God-qaboobe na looga qabsaday waxa weeye, maadaama ciidamada Somaliland
ay sahal u qabsadeen saldhiga kaliya ee difaaca u ahaa magaalada Garoowe. Maleeshiyadii beesha Habar-majeerteen oo dagaalka naflacaariga ah qaadayna si xun loo jebiyey oo ay kala firxadeen. Waxaan islahaa ciidamada
Somaliland iyadoo aan wax iska caabin ah la kulmin ayey magaalada Garoowe qabsan doonaan. Laakiin arinta la yaabka lihi waxa weeye walow hada magaalada Garoowe aad looga qaxahayo, oo cabsi weyn laga qabo
in magaalada la qabsado. Hadana ciidamada somaliland waxay u muuqdaan in amar lagu siiyey inaysan qabsan magaalada Garoowe.
Maalinkii doraad ahaa waxaa gobalka Mudug soo galay ciidan yar oo 5 tigniko ah wata oo beesha (Muumin Aadan) ah. Ciidan kaasi waxay ka soo kicitimeen saldhiga beesha Habar-majeerteen ee God-qaboobe. Maleeshiyadaan ayaa difaaca magaalada Garoowe ee God-qaboobe waxay tageen mudo haatan 3 bilood iyo bar laga joogo. Ayaantii iyadoo wax dagaal ahi uusan dhicin maxaysatada Habar-majeerteen laga soo cayrsadey tuulada Tuko-raq. Oo mar kaas kedib mahbarku ay difaaca ka dhigteen God-qaboobe. Dabeed waxaa dhacady in ciidamada Somaliland na ay ku soo durkeen magaalada Garoowe, oo ay shalmadaha dhigteen meel u muuqata God-qaboobe.
Ujeedada ay niman kaasi furinta uga soo bexeen waxay ahayd in beesha Habar-majeerteen oo aan marna laga fileyn, inay wax dagaal ah ay la galaan ciidamada Somaliland ee kaabiga u fadhiya magaalada Garoowe. Inay go’aan ku gaareen inay ciidamada Somaliland ay weeraraan oo ay iska durkiyaan. Maadaama ay xamiliwaayeen qarashka faraha badan oo ku baxa maalin kasta maleeshiyadooda furinta ku jira. Marka maadaama maleeshiyada beesha (Muumin Aadan) aysan marna ujeedadoodu ahayn inay dagaal galaan. Waxay furinta God-qaboobe ay ka soo bexeen aroor hore shaly subax, maadaama qorshuhu uu ahaa in subaxdaas aaga Boocame iyo aaga ku beegan God-qaboobe sahan loo diro. Maalinta xigta oo ay taariikdu tahay (15/05/2018) na subaxdii laga weeraro ciidamada Somaliland labo aag.
Sidiila filahayey doraad subax taariikhdu markii ay ahayd (14/05/2018) beesha Habar-majeerteen waxay direen labo sahan. Sahan waxay u direen dhanka Boocame oo u qorshahoodu ahaa, in marka la weeraro ciidamada Somaliland ee difaaca uga jira furinta God-qaboobe. Inay ciidan xoog leh oo dhabarjabin ku sameeya ay gadaal uga yimaadaan ciidanka Somaliland. Iyaga oo ka soo wareegahaya dhanka Boocame. Markaas ayaa subaxaas waxaa dhacday in sahankii ay u dirsadeen dhanka God-qaboobe ee fariisinta ciidamada Somaliland, sahanka ciidamada Somaliland intay arkeen ay 3 nin oo mahbar ah ay ka dileen. 5 nin oo kalena ay ka dhaawaceen sahankii mahbarka. Markay intaasi dhacday, ayey mahbarku waxay la hadleen sahankii aadey dhanka boocame oo ay soo celiyeen. Iyaga oo ka baqay in qorshaha dagaalku uu ka fashilmo.
Maleeshiyada God-qaboobe Isku Horfadhidey Iyo Beelaha Ay ka Soo Kala Jeedaan :
Ciidamada Somaliland ee fadhiya God-qaboobe waxay u badanyihiin beesha Dhulbahante. Dhanka Garoowe God-qaboobe maleeshiyada ka fadhidana maleeshiyo xoog leh oo Dhulbahante ah ayaa joogijirtey. Ciidamadaasna waxaa abaanduule u ah nin beesha Dhulbahante ah. Beesha habar-majeerteen maleeshiyadoodu waa labo qaybood oo aan wax kalsooni ah isku qabin. Maleeshiyo Jifada (Ciise Riyoole) ah oo gooni u fadhiya. Ciidanka 3aad na
waa maleeshiyo jifada (Cumar Hoogahaye) ah, oo ay weheliyaan maleeshiyo yar oo beesha reer (Maxamed Muumin) ah iyo (Fiqi-Ismaaciil) isugu jira.
Asbaabaha U Sababta Ahaa In Habar-majeerteen 3-dii Aag Oo Ay Weerareenba Lagu Jebiyo, Saldhigii Maleeshiyadooda Ee God-qaboobana Laga Qabsado:
1) Sidaad ogsoontihiin beesha Habar-majeerteen indhawaale waxay u afduubnayd beesha Dhulbahante. Dhulbahante Habar-majeerteen wuxuu ku hayaa qalac yaab leh, waana ay u afduubanyihiin. Sababta oo ah ciidamada ugu badan ee Somaliland ka jooga furinta God-qaboobe waa Dhulbahante. Difaaca labaad ee ciidamada Somaliland ugu balaaranna waa ciidamada fadhiya Boocame. Ciidamadaas oo ah ciidamadii Khaatumo oo la qarameeyey.
Hadafkooduna uu yahay in Dhulbahante isaga oo shaati somaliland xiran uu Habar-majeerteen ka takhaluso, oo ay magaalooyinka Garoowe iyo Bosaso ay ka qabsadaan. Marka qalaca iyo afduubka uu Dhulbahante Habar-majeerteen ku hayo waxa weeye. “Habar-majeerteenow hadaydnaan nala dhiman oo aydnaan magaalada Lasacanod aydnaan nala xorarayn, anaga oo ciidamada Somaliland wadana ayaanu magaalooyinka Garoowe iyo Bosaso aanu idinka qabsanaynaa”.
2) Arinta kale oo muhiimka ah waxa weeye, soomaalidu waxay tiraahdaa “Dani Waa Seeto”, ciidamada Somaliland iyo jaaba-jaabada Habar-majeerteen ay wadato wax isu dhigma maaha. Ciidamad Somaliland waa quwad aad u balaaran oo Habar-majeerteen 60 jeer ka ciidan iyo hub badan. Marka maadaama beesha Habar-majeerteen ay u arkaan dagaal ay la galaan ciidamada Somaliland halaag aysan ka fursankarin. Jifooyinka habar-majeerteen waxaa ka dhexeeya dagaal munaafaqad ah oo ay isku shirqoolahayaan. Iyadoo jifo walba uu hadafkeedu yahay inaysan dagaalka ku halaagmin oo aysan si daacad ah u gelin.
Daliilna waxaa u ah qorshihii dagaalka ee shalay wuxuu ahaa in iciidamada beesha Dhulbahante iyo jifada (Ciise Riyoole), ay dagaalka bilaabaan oo ciidamada Somaliland ee God-qaboobe daanta galbeed ka fadhiya ay weeraraan. Jifida (Cumar Hoogahaye) iyo xulufadda la socotana qorshuhu wuxuu ahaa, in xabaddu marka ay ka bilaabato aaga God-qaboobe. Inay dhabarjebin sameeyaan oo ay ciidamada Somaliland ay ka soo weeraraan dhanka Boocame.
Laakiin waxaa dhacday in jifada (Cumar Hoogahaye) oo ay la socdaan ciidan yar khasad koodu uusan ahayn inay ciidamada Somaliland dagaal la galaan, inaysan qaadin dagaalkii dhabarjebinta ahaa ee laysku ogaa inay qaadaan. Balse waxay sameeyeen markay maqleen in la jebiyey maleeshiyadii dagaalka bilaabay, oo laga qabsaday saldhigoodii God-qaboobe. Dagaal kuna uu markaas gebo-gebo yahay oo 3 saacadood iyo bar uu socdey.
Ayey ciidankii la rabey inay dhabarjebinta sameeyaan waxay weerar naflacaari ah ku qaadeen ciidanii khaatumo loo qarameeyey oo fadhiya Boocame. Dabadeedna rasaastu markay wax yar socotey ayey maleeshiyadaasi kala firxadeen. Waxaana keliya oo maleeshiyadaasi ay ku guuleysteen inay halaagii dhacay ay ka badbaadaan oo aysan dagaalka gelin. Halka maleeshiyadii beesha Dhulbahante iyo jifada (Ciise Riyoole) ee aaga God-qaboobe
ka dagaalamay dagaal saacado badan socdey ay ku hoobteen.
Mideeda kale 2 dii Taangi ee jifida (Cumar Hoogahaye) saad ogsoontihiin mid waa iyagii dagaalkii labada maalmood nooga cararay oo aanu ka qabsanay. Dabeedna aanu beesha Sacad abaalmarinta u siinay. Midkii kale na maalintii shalay ahayd ayey ka carareen oo laga qabsaday. Ciidamada Somaliland waxay dagaalkii shalay ay ku dileen 58 nin oo habar-majeerteen iyo midiidin kooda ah. Waxayna ka qabsadeen 7 tigniko ah iyo taangi. Waxaa kaloo ay ka gubeen 11 tigniko ah. Waxaa kaloo beesha Habar-majeerteen laga qabsaday saadkii iyo saanaddii u taaley saldhigga God-qaboobe oo dhan. Hal kaas oo afartii bilood ee ugu danbeysey ay isugu geeyeen waxay hub iyo saanad haysteen.
Habar- Majeerteen waa reer aad u jilicsan oo aan looga baran inay hal-adayg iyo dhiiranaan ku meel maraan. Run ahaantii dagaalkii shalay walow ay naftooda ku qamaareen oo ay qar iska tuureen, hadana waxaa la oran karaa geesinimo aan abkood iyo awooweyaashood looga baran bay muujiyeen. Maadaama ay halis ciidan ka awood balaaran ay u bareereen inay weeraraan. Balse haday daruuf dhaqaale xumo ay ku qasabtay inay weerar
isbiimayn ah ay qaadaan. Hada awood doodii ciidan waa la wiiqay waxaadna moodaa in rubadda toorey looga hayo oo qayaamahoodii la gaarey. Waxa keliya oo u muuqdaana waa quus iyo isdhiibid.